रोयको धमाकेदार ब्याटिङमा इंग्ल्याण्डको सहज जित, २७ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रोयको धमाकेदार ब्याटिङमा इंग्ल्याण्डको सहज जित, २७ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा
एजेन्सी । इंग्ल्यान्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दैइंग्ल्याण्ड फाइनलमा प्रवेश गरको छ। डिफेन्डिंग च्याम्पियन अस्ट्रेलियालाई ८ विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड २७ वर्षपछि फाइनलमा प्रवेश गरको हो।
जितका लागि २२४ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले ३२.१ ओभरमा मात्र २ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। इंग्ल्याण्डका लागि ओपनर ज्यासन रोयले सर्वाधिक ८५ रन बनाए। उनले ९ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। यस्तै अर्का ओपनर जोनी बेयरस्ट्रोले ४३ बलमा ३४ रन बनाएर आउट भए। जो रुटले ४९ तथा कप्तान इयोन मोर्गनले ४५ रन बनाएर नटआउट रहे।
अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र प्याट कमिन्सले १/१ विकेट लिए। बर्मिंघममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले ४९ ओभरमा अलआउट हुँदै २२३ रन बनाएको थियो ।
अष्ट्रेलियाका लागि स्टिभ स्मिथले सर्वाधिक ८५ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए । खराब सुरुवात गरेको अष्ट्रेलियाले मात्र १५ रन जोड्दा ३ विकेट गुमाएको थियो । तर, पूर्व कप्तान स्मिथले चौथो विकेटका लागि एलेक्स केरीसँग १०३ रनको साझेदारी गर्दै टिमको इनिङ्स उकासेका थिए । केरी ४६ रनमा आउट भए ।
यस्तै अष्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कले २९ र ग्लेन म्याक्सवेलले २२ रनको योगदान गरे । अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।अष्ट्रेलियालाई सस्तैमा समेट्न इंग्ल्याण्डका क्रिस वोक्स र आदील रशिदले समान ३/३ विकेट हात पारे । जोफ्रा आर्चरले २ विकेट लिए ।
आजको हारसँगै अस्ट्रेलिया पहिलो पटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पराजित भएको छ। इंग्ल्याण्डले उपाधिका लागि १४ जुलाईमा न्युजिल्याण्डसँग खेल्नेछ।